पाँच धनी फूटबलर जसलाई मैदानले करोडपति बनायो | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध पाँच धनी फूटबलर जसलाई मैदानले करोडपति बनायो
on: September 02, 2018 खेल विविध
हजारौं खेलाडीमध्ये केही यस्ता खेलाडी पनि छन्, जो व्यावसायिक खेलका कारण विश्वचर्चितमात्र नभएर त्यत्तिकै धनी पनि छन् ।
हालै सम्पन्न रूसी विश्वकपमा मात्र ३२ राष्ट्रका ७ सय ३६ खेलाडी सहभागी भए । यीबाहेक संसारभरि छरिएर रहेका हजारौं व्यावसायिक फूटबलरहरू खेलेरै जीवनयापन गरिरहेका छन् । पूmटबलबाहेक अन्य खेलमा पनि हजारौंको सङ्ख्यामा व्यावसायिक खेलाडीहरू खेलेरै जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
तर, यी हजारौं खेलाडीमध्ये केही यस्ता खेलाडी पनि छन्, जो व्यावसायिक खेलका कारण विश्वचर्चितमात्र नभएर त्यत्तिकै धनी पनि छन् । उनीहरू खेलकै कारण किशोरावस्थामा नै करोडपति भइसकेका थिए । खेलको राजा मानिने फूटबल त झन् अर्थतन्त्रको ठूलो केन्द्र हो जहाँ खेललाई व्यावसायिक मान्यता दिइन्छ । यसैबीच चर्चित अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सले विश्वका धनी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको सूचीमा अर्जेण्टिनाका लियोनल मेसी सबैभन्दा धनी देखिएका छन् । त्यसपछि पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डो दोस्रो र ब्राजिलका नेमार तेस्रो धनी खेलाडीका रूपमा देखिएका छन् । यी तीनजना समग्रमा विश्वकै धनी खेलाडीको शीर्ष दशभित्र पनि समावेश छन् ।
खेलाडीहरूको मुख्य आम्दानी नै क्लबबाट पाउने वार्षिक पारिश्रमिक हो । यसैगरी, उनीहरूले विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आम्दानी गर्ने गर्छन् । फोब्र्सले केवल विज्ञापन र वार्षिक आम्दानीको मात्र विश्लेषण गरी खेलाडी छनोट गरिएको बताएको छ । पत्रिकाले राष्ट्रिय टीमबाट दिइने पारिश्रमिक यसमा जोडेको छैन । यदि खेलाडीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय टोलीबाट पाउने पारिश्रमक पनि जोड्ने हो भने उनीहरूको कुल सम्पत्ति झनै बढ्छ । तिनै पाँच धनी फूटबलरहरूको सम्पत्ति विवरण र आयस्रोत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
१. लियोनल मेसी (अर्जेण्टिना)
पाँचपटकका फिफा वर्ष खेलाडी लियोनल मेसीको कुल सम्पत्ति ११ करोड १० लाख डलर छ । आधुनिक फूटबलकै सर्वोकृष्ट खेलाडी मेसी बार्सिलोना र अर्जेण्टिनाका प्लेमेकर हुन् ।
बार्सिलोनाबाट मात्र मेसीले प्रतिवर्ष २ करोड ७० लाख डलर पारिश्रमिकका रूपमा लिने गर्छन् । एडिडास, माष्टर कार्ड तथा पेप्सीलगायत विश्वप्रसिद्ध कम्पनीको विज्ञापन गरेबापत उनले २ करोड ७० लाख डलर थप आर्जन गर्छन् ।
२. क्रिष्टियानो रोनाल्डो (पोर्चुगल)
सन् २००९ मा म्यानचेष्टर युनाइटेडबाट स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडमा आबद्ध भएयता पोर्चुगाली स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोको चर्चा चुलिएको हो । म्याड्रिडका अध्यक्ष परेजले रोनाल्डोविना क्लब पूरा नहुने बताउने गर्थे । तर, सन् १०१८ को विश्वकपपछि रोनाल्डोले रियल छाडेर युभेण्टस गइसकेका छन् । उनको वार्षिक कमाइ १० करोड ८० लाख डलर छ । रोनाल्डोले रियलबाट प्रतिसाता ३ लाख ६५ हजार डलर पारिश्रमिक थाप्ने गर्थे ।
३. नेमार (ब्राजिल)
छब्बीस वर्षीय ब्राजिलियन नेमार जुनियर व्यावसायिक फूटबलका लागि ब्राजिली क्लब सान्तोसबाट युरोपतिर हानिएका फूटबलर हुन् । सानैदेखि मेसीलाई आदर्श मानेका नेमार बार्सिलोनासँग सामान्य मूल्यमै अनुबन्ध भए । बार्सिलोनामा तीन सिजन बिताउँदा उनी विश्वकै एक स्टार खेलाडी बन्न सफल भए । महŒवाकाङ्क्षी सपना देख्ने नेमार पुनः आफ्नो स्टारडमलाई एक उचाइ दिन फ्रेञ्च क्लब पीएसजीमा विश्वकीर्तिमानी रकम १९ करोड ८० लाख पाउण्डमा अनुबन्धित हुन पुगे । जीवनमा परिवर्तन खोजिरहने नेमार अहिले विश्वकै तेस्रो धनी फूटबलमा पर्छन् । ब्राजिलियन कप्तान नेमारले ७ करोड ३० लाख डलर पारिश्रमिकबाट कमाएका छन् । उनले १ करोड ७० लाख पाउण्ड विज्ञापनबाट आर्जन गरे ।
४. ग्यारेथ बेल (वेल्स)
वेल्सका ग्यारेथ बेल टोटनह्यामबाट रियल म्याड्रिड आएका हुन् । उनले रियललाई सबैखाले ठूला उपाधि दिलाउँदा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । वार्षिक ३५ मिलियन डलर कमाउने बेलले विज्ञापनबाट मात्रै ५ मिलियन डलर आम्दानी गर्छन् । अत्यन्त तीव्र गतिमा कुद्ने खेलाडीको रूपमा प्रशंसित २९ वर्षीय बेलको कुल सम्पत्ति १ सय मिलियन डलर छ ।
५. पल पोग्बा (फ्रान्स)
पोग्बा युरोपको महँगा खेलाडीमा पर्छन् । २५ वर्षीय फ्रान्सेली युवा खेलाडी पोग्बाको वार्षिक आम्दानी २ करोड ९५ लाख पाउण्ड छ । युनाइटेडका महँगा खेलाडी पोग्बाले प्रतिसाता २ लाख ९० लाख पाउण्ड कमाउँछन् । फ्रान्सलाई विश्वविजेता बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले आगामी जनवरी महीनाबाट इङ्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड छाड्ने सङ्केत गरेका छन् ।